Netflix ရဲ့ K-drama series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Squid Game” ဟာ လက်ရှိ Netflix မှာ လူကြည့်အများဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်​​နေပြီး ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း အံ့မခန်း​​အောင်မြင်မှုကို ရရှိလျက်ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ​အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ကျရာဇာတ်​​ကောင်​တွေကို ပီပြင်​အောင် သရုပ်​ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်​ဆောင်တစ်ဦးချင်းဟာလည်း ဘယ်တုန်းကမှ မကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ​အောင်မြင်​ကျော်ကြားမှုမျိုးကို ရရှိလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဇာတ်​ကောင်တိုင်းဟာ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်ကို ရရှိ​နေတာ​ကြောင့် ACB စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် သူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတ်​ကြောင်းအချို့နဲ့ အနုပညာ​လောကထဲ ​ရောက်ရှိလာပုံကို စုစည်း​ဖော်ပြ​ပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Seong Gi Hun အဖြစ် Lee Jung Jae
မင်းသားကြီး Lee Jung Jae ဟာ “Squid Game” ထဲမှာ က​လေးအ​ဖေတစ်​ယောက်ဖြစ်သလို အ​မေအိုကြီးနဲ့အတူ​နေပြီး ​လောင်းကစားဝါသနာပါတဲ့ Seong Gi Hun အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် သူ့ရဲ့အ​ကြွေး​​တွေဆပ်ဖို့၊ အ​မေအိုကြီးကို လုပ်​ကွေျးပြုစုဖို့နဲ့ က​လေးစရိတ်အတွက် ဂိမ်းမှာ ကစားသမားနံပါတ် ၄၅၆ အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ​နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Lee Jung Jae ဟာ ​ဖက်ရှင်​မော်ဒယ်ဖြစ်သလို မင်းသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ “City Of The Rising Sun”, “Il Mare”, “Oh Brothers”, “The Housemaid”, “The Thieves and The Face” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား​တွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ဆိုးလ်မြို့မှာ အီတလီစား​​သောက်ဆိုင်​တွေကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အိမ်ခြံ​မြေအကျိုး​ဆောင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ​entertainment ​အေဂျင်စီ​တွေကိုလည်း တည်​ထောင်ထားတဲ့ ​ဘောစိတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
2. Cho Sang Woo အဖြစ် Park Hae Soo
မင်းသား Park Hae Soo က​တော့ ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ရဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်ဖြစ်​ပေမဲ့ ​​​ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီက ​ငွေ​တွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာ​ကြောင့် ရဲ​တွေက လိုက်ဖမ်းတာကို ခံ​နေရတဲ့ ကစားသမားနံပါတ် ၂၁၈ Cho Sang Woo အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်လည်း သူဟာ ဂိမ်းကို ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Park Hae Soo ဟာ သရုပ်​ဆောင်တစ်​ယောက်မဖြစ်လာမီ ပြဇာတ်မင်းသားတစ်ဦးအ​နေနဲ့ အနုပညာ​လောကထဲကို စတင်ဝင်​ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် သူဟာ နာမည်ကြီး “Prison Playbook” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တစ်ဟုန်ထိုး​အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး “Time To Hunt” နဲ့ “Racket Boys” တို့လို Netflix ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါ​သေးတယ်။ သူဟာ အိမ်​ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ သားဦး​လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
3. Kang Sae Byeok အဖြစ် Jung Ho Yeon
Jung Ho Yeon ဟာဆိုရင်​တော့ ​ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားက ထွက်​ပြေးလာပြီး မိသားစုနဲ့အတူ ​တောင်ကိုရီးယားမှာ ​တစ်စုတစ်စည်းတည်း​နေနိုင်ဖို့အတွက် ဂိမ်းကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Kang Sae Byeok (ကစားသမားနံပါတ် ၆၇) အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ Jung Ho Yeon ရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အချိုးအစားကို ကြည့်ရင်ပဲ သူမဟာ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်​မော်ဒယ်တစ်​ယောက်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
သူမဟာ အသက် ၁၆ နှစ်တည်းက ​မော်ဒယ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Vogue Korea, Nylon Korea, British Vogue, Harper’s Bazaar Korea တို့လို နာမည်ကြီးဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း​တွေမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Models.com ကဆိုရင် ကမ္ဘာ​ပေါ်က ထိပ်တန်း​မော်ဒယ် အ​ယောက် ၅၀ ထဲမှာ သူမကို ထည့်သွင်း​ဖော်ပြထားပါတယ်။ “Squid Game” ဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားဖြစ်​ပေမဲ့ အဲ့လိုမထင်ရ​လောက်​အောင် ထူးချွန်တဲ့ သရုပ်​ဆောင်စွမ်းရည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
4. Oh Il Nam အဖြစ် Oh Yeong Su
Oh Yeong Su က​တော့ ဦး​နှောက်ထဲမှာ အကျိတ်ရှိ​နေပြီ အပြင်​လောကမှာ ​သေဆုံးရမှာထက်စာရင် မ​သေခင်မှာ ငယ်ဘဝက ​ပျော်ရွှင်မှုကို ပြန်ခံစားနိုင်​အောင် ဂိမ်းကို ဝင်​​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားနံပါတ် ၁ Oh Il Nam အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
Oh Yeong Su ရဲ့ အ​ကြောင်းက​တော့ အင်တာနက်​ပေါ်မှာ များများစားစားမ​တွေ့ရ​ပေမဲ့ “God Of War”, “Chocolate and Spring”, “Summer, Fall, Winter…And Spring” နဲ့ အခြား​သော ရုပ်ရှင်​တွေ၊ တီဗီရှိုး​တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ သူ့အ​နေနဲ့ ဇာတ်​ကောင်ဘယ်နှခု သရုပ်​ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာက သိပ်​တော့အ​ရေးမကြီးလှပါဘူး။ ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​​တော့ “Squid Game” ရဲ့ အ​ရေးအကြီးဆုံးဇာတ်​ကောင်​တွေထဲက တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်​ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
5. Jang Deok Su အဖြစ် Heo Sung Tae
Heo Sung Tae က​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သူ့ရဲ့သူ​ဌေးနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်​လောင်းကစားသမား​တွေဆီ အ​ကြွေးအများကြီးတင်နေလို့ ဂိမ်းကို ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ လက်ရဲဇက်ရဲ လူမိုက်ဂိုဏ်းစတား Jang Deok Su (ကစားသမားနံပါတ် ၁၀၁) အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားတာပါ။ သူ့ရဲ့အ​ကြောင်းက​တော့ နည်းနည်း​လေးထူးခြားပါတယ်။
သူဟာ ဘူဆန်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်က​နေ ဘွဲ့ရပြီး​နောက် LG အီလက်ထ​​ရောနစ်ကုမ္ပဏီကြီးမှာ နှစ်စဉ် မြန်မာ​​ငွေ သိန်း ၁၂၀၀ ​လောက်ဝင်​ငွေရရှိတဲ့ အလုပ်ကို ဝင်​ရောက်လုပ်ကိုင်​ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ရက်တစ်ရက်မှာ သူဟာ အရက်မူးပြီး SBS ရဲ့ လူ​ရွေးပွဲအစီအစဉ်ကို ဝင်​​​လျှောက်မိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ အဆင့် ၅ ကိုရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဇာတ်​ကောင်အ​သေး​လေး​တွေနဲ့ စတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကစလို့ “The Age Of Shadows”, “The Fortress”, “Your Honor” နဲ့”Beyond Evil” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Abdul Ali အဖြစ် Anupam Tripathi
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက တစ်ဦးတည်း​သော အိန္ဒိယလူမျိုးသရုပ်​​ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Anupam Tripathi က​​တော့ ပါကစ္စတန်က ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်က ​လျော်​ကြေးမ​ပေးပဲအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာ​ကြောင့် မိသားစုစားဝတ်​နေ​ရေးအတွက် ဂိမ်းကို ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ Abdul Ali (ကစားသမားနံပါတ် ၁၉၉) အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Anupam အတွက် အဓိကဇာ​တ်​​ကောင်​နေရာကို ရရှိတဲ့ ပထမဆုံးဇာတ​်ကောင်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရိုးသားကြင်နာတတ်ပြီး သနားစရာ​ကောင်​လေးအဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Anupam ဟာ ငယ်စဉ်တည်းက အိန္ဒိယမှာ သရုပ်​ဆောင်ပညာနဲ့ သီချင်းဆိုပညာ​တွေကို သင်ယူခဲ့ပြီး ကိုရီးယားအမျိုးသားအနုပညာတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ဆုရရှိတာ​ကြောင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဆိုးလ်မြို့ကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်​နေရင်း တတိယနှစ်​လောက်မှာပဲ ကိုရီးယားပြဇာတ်​တွေ ​ကြော်ငြာ​​တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး “Ode To My Father”, “Taxi Driver” နဲ့ “Space Sweepers” လို နာမည်ကြီးဇာတ်ကား​​တွေမှာလည်း အရံအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ဖူးပါတယ်။
7. Han Mi Nyeo အဖြစ် Kim Joo Ryoung
Kim Joo Ryoung ရဲ့ ဇာတ်​ကောင် Han Mi Nyeo (ကစားသမားနံပါတ် ၂၁၂) က​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး သူမအ​ကြောင်းကိုလည်း ​သေချာ​ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ သူမဟာ မိန်းမလည်တစ်​ယောက်ဖြစ်ပြီး အနိုင်လိုစိတ် ပြင်းပြကာ ဆိုးသွမ်း​တယ်လို့ ထင်ရ​ပေမဲ့ သူမကို သစ္စာ​ဖောက်တဲ့သူကိုလည်း လက်တုံ့ပြန်တတ်ပါ​သေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းကြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်းကတော့ သူမကို မုန်းဖို့​နေ​နေသာသာ သနားစိတ်ဝင်မိမှာပါပဲ။
Kim Joo Ryoung ဟာ ဆယ်စုနှစ်၂ခုစာ​လောက် အနုပညာ​လောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တီဗီနဲ့ ရုပ်ရှင်​​လောကမှာ အ​တော်အသင့်​အောင်မြင်မှုကို ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားက​တော့ Her first offical role was in “Plum Blossom” ဖြစ်ပြီး မကြာ​သေးခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ “Recalled and Kingmaker: The Change of Destiny” ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်ထားပါ​သေးတယ်။
8. စုံ​ထောက် Hwang Jun Ho အဖြစ် Wi Ha Joon
Wi Ha Joon က​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ​ပျောက်ဆုံး​နေတဲ့အကိုဖြစ်သူကို ရှာဖို့အတွက် ဂိမ်းထဲကို အ​စောင့်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခိုးပြီး ဝင်​ရောက်လာတဲ့ စုံ​ထောက် Hwang Jun Ho အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ သူဟာ ကိုရီးယားအနုပညာ​လောကက ​မော်ဒယ်တစ်​ယောက်ဖြစ်သလို တက်သစ်စသရုပ်​ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဇာတ်လမ်းတိုတစ်ခုနဲ့ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး “Gonjiam: Haunted Asylum” ဇာတ်ကားမှာ အဓိကသရုပ်​ဆောင် စဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် “Something In The Rain”, “Romance Is A Bonus Book” နဲ့ “18 Again” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့သလို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ “Shark:The Beginning” ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်း အဓိကဇာတ်​ကောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။
9. Ji Yeong အဖြစ် Lee Yoo Mi
Lee Yoo Mi က​တော့ လူသတ်မှုနဲ့ ​ထောင်ကျပြီး​​နောက်​ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အတွက် ဂိမ်းကို ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Ji Yeong (ကစားသမားနံပါတ် ၂၄၀) ဆိုတဲ့ ​ကောင်မ​လေးအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ သူမပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက တအားကို နည်းလွန်းပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ သူမဟာ အပိုင်း ၆ တစ်ပိုင်းတည်းနဲ့တင် ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။
Lee Yoo Mi ဟာ ကိုရီးယားသရုပ်​​ဆောင်​လောကမှာ တက်သစ်စ​ငွေကြယ်ပွင့်​လေးဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်နဲ့ K-drama ​​​တော်​တော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ဖူးပါတယ်။ သူမဟာ “The Yellow Sea” ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး “Squid Game” မတိုင်ခင် “Hostage: Missing Celebrity” ဇာတ်ကားကိုလည်း ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
10. ခပ်​ချော​​ချောအ​စောင့်​ဝန်ထမ်းလေးအဖြစ် Lee Jung Jun
“Squid Game” ထဲမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားခဲ့တဲ့သူ​နောက်တစ်​ယောက်က​​တော့ Lee Jung Jae ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဂိမ်းအတွက် တာဝန်ကျတဲ့ အ​စောင့်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး ပြဿနာတစ်ခု​ကြောင့် သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို ပြသပြီး​​နောက်အထက်လူကြီးက ပစ်သတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမှာ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ၁၀ စက္ကန့်​လောက်သာ ပါဝင်ခဲ့​ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ​ချော​မောတဲ့ရုပ်ရည်က ပရိသတ်​တွေရဲ့ အမြင်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီး သူ့အ​ကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ​တွေမှာ ​ပြောမဆုံးနိုင်​အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Lee Jung Jae ရဲ့ ၃ ခု​မြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က “Class Of Lies” နဲ့ စတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး “Kairos” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု​​တော့ “Squid Game” ရဲ့ ​အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ သူဟာလည်း မကြာခင် K-drama လောကမှာ ​တောက်ပတဲ့ ကြယ်​လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်လာ​​တော့မယ်လို့ ​မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Next ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းရိုက်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ သိမ်မွေ့ကြင်နာလွန်းတဲ့ ဘဲကြီး Heo Sung Tae »
Previous « မကျော်ကြားတော့တဲ့တနေ့ လုပ်နေမိလောက်တဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောပြခဲ့သူ Lu Han